नाटकमा राजनीति खोई ?- कला - कान्तिपुर समाचार
नाटकमा राजनीति खोई ?
भाद्र २१, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — पछिल्लो समय नेपाली रंगमञ्चमा विचारतत्त्व कमजोर बन्दै गएको युवा रंगकर्मीहरूले औंल्याएका छन् ।
मण्डला थिएटरमा बुधबार आयोजित अन्तरक्रियाका क्रममा युवा रंगकर्मी केदार श्रेष्ठले अहिले नेपाली नाटकहरूमा विचारकै पक्ष खड्कने गरेको बताए । ‘हामी राजनीति भन्ने बित्तिकै राजनीतिक पार्टी बुझ्छौँ,’ उनले भने, ‘यो त विचार हो, सिद्धान्त हो । जुन नाटकमा छैन ।’
कला विचारबाटै निर्देशित हुने हुँदा कुनै निश्चित विचारप्रति निर्देशक स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यसलाई नाटकमा उतार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘निर्देशकको विचारमा सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘यो एउटा चुनौती हो । तर यसले गर्दा नाटकमा उठाएका विषय र विचारमाथि बहस हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’
अन्तरक्रियामा युवा रंगकर्मीहरू पशुपति राई, आकांक्षा कार्की र चेतन आङयुपो सहभागी थिए । उनीहरू मण्डलाले गतवर्ष भदौमा गरेको तीनहप्ते कार्यशाला र हालै पोखरामा सम्पन्न त्यसको दोस्रो संस्करणमा समेत सहभागी थिए ।
कार्यशालापछि दर्जन निर्देशक मिलेर नाटक ‘खबर हराएको चिठी’ तयार पारेका थिए, जुन यति बेला मण्डलामा नियमित मञ्चन भइरहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरू तथा तीनको परिवारले भोगिरहेका चार फरक कथा जोडेर नाटक तयार पारिएको हो ।
अन्तरक्रियाका क्रममा पशुपतिले नाटक देखाउनुभन्दा पहिले निर्देशक आफैंले पनि राजनीतिक, सामाजिक विषयवस्तुहरू खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘हामी जे देखाउँदै छौँ, पहिले हामी आफैं त्यसमा पूर्ण ज्ञान हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
पशुपतिको भनाइमा सहमत हुँदै श्रीजन दाहालले अहिलेका नाटककार र निर्देशकहरू आत्मरतिमा रमाइरहेको आरोप लाए । ‘बाहिर के भइरहेको छ हामीलाई थाहै हुन्न,’ उनले नाटक खबर हराएको चिठी तयार पार्दाका क्षणहरू सम्झिँदै भने, ‘यो नाटकको लागि जब बेपत्ता नागरिकको बारेमा खोज्न थाल्यौँ, हामीलाई त केही नै थाहा रहेनछ भन्ने भयो ।’ रंगकर्मी आकांक्षाका अनुसार कुनै पनि गहन विषयवस्तुलाई उठाउँदा त्यसमा संघर्षका साथसाथै लुकेका भित्री कुरालाई पनि ल्याउनुपर्नेहुन्छ ।
उनले १७ वर्षअघि पति बेपत्ता भएकी महिलाको उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘उहाँले पति बेपत्ता भएपछि संघर्ष गरेर छोरीहरूलाई पढाउनुभयो, अहिले आफु पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ । तर जहिले पनि सञ्चारमाध्यम र अन्य क्षेत्रमा उनीहरूले भोगेको दु:ख र पीडा मात्रै आयो, उनीहरूको सामथ्र्य, संघर्ष आएन ।’
नाटक ‘खबर हराएको चिठी’ मा केदार, पशुपति, सिजन, चेतन, आंकाक्षालगायत सामुहिक काम गर्नेमा चे शंकर, सुदाम सिके, किरण चाम्लिङ राई, परिवर्तन, पत्रिका घिमिरे, रेनुका कार्की, र सोनाम लामा छन् । नाटक २४ गतेसम्म मञ्चन हुनेछ ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०८:३४
काठमाडौँ — चित्र कोर्नेहरू हरेकको सपना हुन्छ, पाब्लो पिकासो जस्तै प्रख्यात बन्ने । १८ औं शताब्दीका यी विश्वविख्यात चित्रकारलाई पच्छयाउने आधुनिक पुस्ताका नेपाली चित्रकाहरू थुप्रै छन् ।
तीमध्ये एक हुन्, ललितकलामा स्नातकोत्तर गरेका उपकार घमाल । उनी पिकासोका जबर्जस्त फयान हुन् । कलेज अध्ययनकै क्रममा पढ्नुपर्ने विषयमा परे पनि उनी पिकासोका हरेक आनीबानी गुगल सर्च गरेर हेर्छन् । ‘पिकासोको रंग संयोजन निकै गहिराइका साथ अध्ययन गर्न मन लाग्छ,’ उनले भने । यतिसम्म कि केही चित्र त क्यानभासमै कपीसमेत गरेका छन् उनले ।
केही साताअघि भने उपकार लाजिम्पाटस्थित अरुपण आर्ट ग्यालरीमा पिकासोले बनाएका चित्र क्यानभासमा उतार्दै थिए । ग्यालरीका प्रमुख तथा कला समीक्षक रमेश खनालले अमेरिकाबाट पिकासोका स्टिकर साइजका चित्रका प्रतिलिपि ल्याएका थिए, जसलाई उपकार लगायत सात युवा चित्रकारहरूले नक्कल गरे ।
एक साइडमा बसिरहेकी युवतीको आकृतिलाई उपकारले दुइटा हात एकैचोटि चलाएर दुवै साइडमा आकृति बनाए । ‘पिकासो एउटै हातले काम गर्थे, मचाहिँ दुवै हातले कुची चलाउँछु,’ उनले भने, ‘तर, उनको नक्कल उतार्नु पनि निकै गार्‍हो काम रहेछ ।’ पिकासोले कस्तो रंग चलाउँथेभन्दा पनि उनको सोचबाट आफू प्रभावित भएको उपकारले बताए । अरूले जे गरेका छन्, त्यसको ठीक विपरीत कलाकर्म गर्ने पिकासोको स्वभाव पनि उपकारलाई मन पर्छ ।
ब्याचलर्स अफ आर्ट (बीएफए) दोस्रो वर्ष अध्ययनरत प्रज्ञा नकर्मी पनि पिकासोका फयान हुन् । हालैको दिन उनी पनि पिकासोको चित्रको नक्कल गर्ने क्रममा थिइन् । तर, चित्र हेरेर क्यानभासमा उतार्न उनलाई झन्डै ६ घण्टा लाग्यो । पिकासोका चित्र हेर्दा जति सजिलो र सरल देखिन्छ बनाउँदा उति नै कठिन भएको प्रज्ञाको अनुभव छ । ‘सायद, यही नै पिकासोको कामको विशेषता होला,’ उनले भनिन्, ‘उनको आफ्नै शैली छ, त्यसलाई कपी गर्नै सकिँदैन ।’
बीएफए दोस्रो वर्षकै विद्यार्थी मनीषा डंगोल भने पिकासोबारे सुनेकी मात्रै थिइन् । उनको काम कस्तो छ ? गुगल सर्च गरेरसम्म उनले हेर्न भ्याएकी थिइन् । तर, जब ग्यालरीमा पिकासोका चित्र हेरिन्, त्यसपछि उनलाई अनौठो लाग्यो । ‘सधैं देखिरहेको भन्दा निकै बेग्लै चित्र देखेझैं लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘पिकासोबारे सुन्नु र उनका काम प्रत्यक्ष हेर्नुमा धेरै फरक रहेछ ।’
उनले पिकासोको चित्रबाट कुर्सीमा बस्दै गरेकी महिलाको आकृति आफ्नो क्यानभासमा उतारिन् । चित्र बनाइसकेपछि पिकासोको प्रिन्ट चित्र र आफूले बनाएको वास्तविक चित्र दाँजिन् । ‘रंग संयोजन र स्केचको रेखामा निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भनिन् ।
यसरी पिकासोका चित्र बनाउनेमा सुजिता चौधरी, शर्मिला तामाङ, तीर्थकुमारी सुनुवार, चिरञ्जीवी श्रेष्ठ लगायत थिए । रमेशका अनुसार पिकासोका चित्र हेरेर क्यानभासमा उतार्न सक्नु भनेको आफैंमा ठूलो साधना हो ।
ललितकलाका विद्यार्थीले कलाको इतिहास अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले ग्यालरीमा पिकासोको चित्रमाथि कार्यशाला गरेका थिए ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०८:३३
लन्डनमा मनाइयो बुद्ध जयन्ती
गुरुदेवको सुरमय सन्ध्या
नारायणको 'साधना प्रकाश' विमोचन
मिथिला शैलीमा काठमाडौं कथा
पाटन संग्रहालयमा दुई एकल चित्रकला